Somaliland: Wasaaradda Diinta oo Kutub Madaxweynuhu Soo Daabacay u Qaybisay Jimciyadaha Shuruudaha Aqoonsiga buuxiyey | Aftahan News
“Diiwaangelintii Maddarasadaha ee Hargeysa guul bay ku dhammaatay, waxay 21-ka bishan diiwaangelintu ka bilaabmaysaa gobollada Saaxil iyo Togdheer. Waxaan Baaq u dirayaa…” Agaasimaha guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Aadan Cabdillaahi Cabdalla
Hargeysa(aftahannews):- Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland, ayaa maanta Kutub Qur’aan ah oo Madaxweyne Muuse Biixi bixiyey kharashka lagu soo daabacay u qaybiyey Jimciyadaha buuxiyey Shuruudihii ay wasaaraddu uga baahnayd, kuwaas oo sidoo kale Shahaadooyinka aqoonsina la guddoonsiiyey.
WASAARADDA DIINTA IYO AWQAAFTA SOMALILAND OO QAYBISAY KUTUB MADAXWEYNE BIIXI SOO DAABACAY
Kulankii Shahaadooyinka aqoonsiga iyo kutubta Qur’aanka lagu guddoonsiiyey Dalladaha ay ku midoobeen Maddarasadaha Diiniga ah ee Hargeysa kuwooda shuruudaha buuxiyey ee wasaaraddu aqoonsatay oo kala ah Iqra, Al-huda iyo Qur’aanul Kariim, ayaa lagu qabtay xarunta wasaaraddaas ee magaalada Hargeysa, waxxaana ka qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaraddaas, masuuliyiinta wasaaradda qaarkood iyo madaxda dalladahaas.
WASAARADDA DIINTA IYO AWQAAFTA SOMALILAND OO QAYBISAY KUTUB MADAXWEYNUHU DAABACAY 2019
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Sheekh Aadan Cabdillaahi Cabdalla, ayaa ugu horreyn kulankaas ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyey daalladahaas iyo bilawga qaybinta Kutubtan uu Madaxweynuhu soo daabacay, dhammaystirka diiwaangelinta maddarasadaha ee Hargeysa ka socotay labadii bilood ee u dambeeyey. Waxaanu intaas ku daray agaasimuhu in 21-ka bishan gobollada Saaxil iyo Togdheer ka bilaabayaan wejiga labaad ee diiwaangelinta Maddarasadaha.
“Jimciyadaha amma Dalladaha shuruudihii looga baahnaa ee dalladnimo buuxiyey, baannu halkan ku guddoonsiinaynaa Jimciyadaha iyo Kutubta Qur’aanka Kariimka ah ee uu soo daabacay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi oo boqol kun oo Kutub ku dhaw, kuwaas oo loogu talogalay da’yarta qur’aanka barata, maanta ayaannu rasmi u bilawnay qaybintooda,” ayuu yidhi agaasimaha guud ee wasaaradda Diinta iyo awqaaftu.
Mar uu Agaasimaha guud ka hadlay habka ay u dhammaatay diiwaangelintii maddarasadaha ee Hargeysa ka socotay labadii bilood ee u dambeeyey, wuxuu yidhi; “Diiwaangelintii Hargeysa ee maddarasadaha diiniga ahi guul bay ku soo dhammaatay, aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo gacan nagu siisay oo uu ugu horreeyo Madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi, Macallimiinta, Maamulayaasha Maddarasadaha iyo Masuuliyiinta Jimciyadaha ay Maddarasadaha Hargeysa ku midoobeen.”
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Diinta Aadan Cabdillaahi Cabdalla oo shaacinaya Jimciyadaha aqoonsiga helay, waxa uu yidhi; “Saddexda Jicmiyadood ee buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, waxay kala yihiin; Maktabka Iqra, Jimciyatul Qur’aanul Kariim iyo Al-Huda qaybteeda waxbarashada Qur’aanka. Waxaannu leenahay dedaalkiinna halkaas ka sii wada. Sidoo kale, maaddaama oo ay shuruudhihii wasaaraddu ka doonaysay buuxiyeen Dalladahani, waxay wasaaraddu u garatay in qaybinta Kutubta Qur’aanka ah iyaga lagu bilaabo oo maddaariska hoos-yimaadda saddexdaa Jimciyadood Kutubtan la gaadhsiiyo.”
Diiwaangelinta maddarasadaha ee toddobaadka dambe Burco iyo Berbera laga bilaabi doono, ayuu ka hadlay Agaasimaha guud, waxaanu baaq u diray culimada gobollada. “Waxaannu toddobaadka dambe bilaabaynaa diiwaangelinta maddarasadaha ee gobollada Saaxil iyo Togdheer oo ay ka bilaabmi doonto Berbera iyo Burco. Waxaannu u soo xidhnay tabobbar shaqaalaha gobollada qaar ka mid ah, shaqaalihii wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Togdheer iyo Saaxil halkan (xarunta wasaaradda) ayaannu tabobbar ku siinnay saddex cisho socday, way ambabaxeen, waxaanay diyaar ku yihiin goobohoodii shaqo oo ay diiwaangelinta ka bilaabi doonaan,” sidaa ayuu yidhi agaasimaha guud.
Waxaanu Agaasime Aadan intaas ku ladhay; “Markaa, waxaan Macallimiinta iyo Maamulayaasha Maddarasadaha gobolladaas ugu baaqayaa inay is-diiwaangeliyaan oo si fiican ay ula shaqeeyaan shaqaalaha Wasaaradda oo ay ku daydaan sidii ay noola shaqeeyeen Culimada Hargeysa ee Dalladaha iyo Maddarasaduhu.”
Agaasimaha guud waxa uu sheegay in dhammaadka bishan la dhammaystiri doono sida qorshuhu yahay diyaarinta Manhajka Maddarasadaha, oo ay gacanta ku hayaan Guddi Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu u magacaabay, isla markaana markay soo dhammaystiraan intaan la daabicin ka hor lagala tashan doono Culimada dalka, ka dibna la daabici doono.
Sidoo kale, Agaasimaha waaxda Maddaarista iyo Masaajiddada Sheekh Maxamed Macallin Aadan iyo Agaasimaha Waaxda Fadwada Sharciga ee wasaaradda Sheekh Axmed Dhimbiil, ayaa iyaguna halkaas ka hadlay, waxaanay u mahad-celiyeen Masuuliyiinta Wasaaradda iyo Madaxweynaha oo Kutubtan cusub soo daabacay, Macallimiinta iyo Maamulayaasha Maddarasadaha iyo Jimciyadaha, waxaanay Madaxda dalladaha ku boorriyeen inay Kutubta Qur’aanka ah daryeelaan oo ay ardayda iyo waalidiinta ku dhiirrigeliyaan in Qawlka Eebbe la ilaaliyo oo aan la dayicin.
Maxamuud Yuusuf oo ah guddoomiyaha Jimciyadda Iqra, Madaxa Jamcuyatul Qur’aanu Kariim Cali Cabillaahi Cilmi iyo Cabdifataax Yuusuf Xirsi oo ka socday Jimciyadda Al-Huda, ayaa iyaguna halkaas ka hadlay, isla markaana bogaadiyey Masuuliyiinta Wasaaradda iyo Madaxweynahaba, waxaanay isla madashaa Agaasimaha guud ee wasaaradda Diinta kaga guddoomeen Shahaadooyinka aqoonsi iyo Kutubta Qur’aanka ah, oo ay Jimciyaduhuna ardayda dhigata maddaariska hoos-yimaadda u qaybin doonaan.
“Wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaannu uga mahad-naqaynaa Kutubtan iyo kuwo ka horreeyey oo ay noo qaybiyeen, diiwaangelintii iyo tabobbarro ay noo qabatay wasaaraddu. Annagu haddaannu nahay madaxdii Jimciyadaha Maddaariska Qur’aanku ku midoobeen, wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa wasaaradda oo aannu hoos-tagno oo ku qanacsannay siday madaxda wasaaraddu noola shaqayso. Dalladaha la ictiraafay ee shuruudaha buuxiyeyna waan hambalyeynayaa.” Sidaa waxa yidhi Madaxa Jamcuyatul Qur’aanu Kariim Cali Cabillaahi Cilmi.
Diiwaangelinta Maddarasadaha Diiniga ah oo labadii bilood ee u dambeeyey ka socotay Hargeysa, ayaa lagu diiwaangeliyey ku dhawaad kun maddarasadood oo buuxiyey shuruudaha looga baahnaa, waana markii ugu horreysay ee sidan oo kale diiwaangelin rasmi ah loogu sameeyo maddarasadaha qur’aanka tan iyo intii ay Somaliland jirtay, isla markaana loo sameeyo manhaj isku mid ah oo isna dhawaan la daabici doono.